uRabada noMendis bayaqhudelana njengentsha enamandla
PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA - DECEMBER 29: Kagiso Rabada of South Africa during day 4 of the 1st Test match between South Africa and Sri Lanka at St George’s Park on December 29, 2016 in Port Elizabeth, South Africa. (Photo by Sydney Seshibedi/Gallo Images)
Yonke imidlalo yamaTest enamathuba agqamayo futhi eminye yayo ivelile ngosuku lwesine ntambama kumdlalo wokuqala weSunfoil Test eSt. George’s Park ngoLwesine phakathi kwabadlali ababili abakhuphukayo kwikhilikithi.
uKusal Mendis noKagiso Rabada baneminyaka engu-21, bobabili badlala kwiTest yeshumi nambili futhi bobabili sebedlale indima enkulu kumdlalo ngale konyaka.
uMendis usehlanganise ikhulu elikhulu edlala neAustralia kanye no-50 ababili edlala ngaphandle kwasekhaya, ne-England neSouth Africa. uRabada yena uzingela i-Test wicket yakhe yamashumi amahlanu (ebenangu-47 ekupheleni komdlalo izolo ebusuku) futhi usekhethiwe kwiqembu lamaTest ku-2016 ngabadlali abafana noMichael Vaughn noGlenn McGrath.
Njengoba kunzima ukufinyelela kwi-world record ebekelwe iSri Lanka engu-488 ukuze iphumelele, uMendis nokapteni wakhe, uAngelo Mathews, benze kwaba sengathi kungenzeka lokhu ngesikhathi behlanganisa i-partnership engu-75 kuma-overs angu-18. uMendis, ubukeke ekwi-form encomekayo, noma ebeshaya amabhola amaningi emoyeni – kuyinjabulo yokuba musha – kanye nokudlala esebenzisa unyawo laphambili nolwasemuva bekusezingeni.
Bekudinga uFaf du Plessis, obenesikhathi esihle njengoba esengukapteni wamaTest, ukuqhamuka nento encomekayo ukuphula i-partnership futhi uthole isixazululo ekubuyiseni uRabada ukuthi azophosa ngale kwe-wicket.
uMendis uzame ukumphosa ngale kwama-slips kodwa ibhola ulihambise kumagilavu a-Quinton de Kock. Waphinde watshengisa ukuthi uphoxekile njengoba ehambe ngokudinwa. uMathews ebezamile ukuthi uMendis ehlise umoya kwi-over edlule ngesikhathi eshaya ibhola laKeshav Maharaj sabudedengu lacishe lafika kuRabada kwi-deep mid-on.
Yena uzosheshe afunde njengabo bonke abadlali abaphezulu.
Kusazobonakala ukuthi kwenzakalani ngosuku lokugcina kodwa ukuphuma kwaMendis bekuyisikhathi esibalulekile. Beku umzuzu kuphela ngesikhathi umdlali omngenelile, uDinesh Chandimal, ededelwe uStephen Cook kwi-deep mid-off kuphosa uMaharaj. Uma ebephuma, iSri Lanka ibizobe isiphunyelwe abadlali abahlanu isashoda ngama-runs adlulile ku-280 kanye nebhola lesibili elisha lizofika maduzane.
Yona bekuyindawo uDu Plessis akade eyifuna.
Bekungenalutho ekugcineni ngoba uMaharaj ugcine ehleka ngesikhathi uChandimal elinika uRabada ibhola emuva kwama-runs amahlanu.
Lokho kusho ukuthi ibhola elisha lesibili lifike iSri Lanka ilahlekelwe ama-wickets amahlanu futhi isadinga ama-runs angu-261 ukuze inqobe umdlalo, nama-specialist batsmen okugcina ekwi-crease.
Ekupheleni kosuku, iSri Lanka ibidinga ama-runs angu-248 futhi nokho belwile, iSouth Africa isendaweni enhle. uMathews kuzomele adlale njengokapteni uma efuna ukushintsha izinto.
uMaharaj uphose kangcono kunalokhu okushiwo izinombolo futhi ebengenza kangcono ukube abadlali bebemsekela enkundleni ngezinye izikhathi. Uphosa nge-drift eningi, eyekisa abashayi ukuthi bamqonde futhi kukhona akwakhile kodwa akuphendukanga kwaba amathuba.
Ekuqaleni kosuku, uDu Plessis noQuinton de Kock bebethathe i-partnership yabo ye-wicket yesithupha ukuthi ifike ku-126 – i-rekhodi elisha bedlala neSri Lanka, behlula u-124 kaLance Klusener noMark Boucher eGalle ngo-2000.
Beku usuku oluhle kuDu Plessis owenze i-declaration enhle futhi wabahlela kahle abaphosi bakhe.
Bowlers prepared for hard toil on final day Rabada, Mendis go head to head in a clash of young titans Cook and Elgar combo starts to click Philander sets the tone before centurion Cook cashes in Sri Lanka battle conditions to stay in touch with Proteas De Kock and Philander hold key to big first innings Lakmal earns first day honours Bowling in partnerships key – Abbott Proteas look to end year on a high Sri Lanka end tour match with useful draw Rankings boost for Proteas